Ny Mesia dia irak'Andriamanitra voatendry sy voahosony hamonjy ny olombelona. Ny fivavahana jiosy sy kristiana ary silamo no tena ahitana ny finoana ny amin’ny Mesia nefa ny fivavahana hafa koa dia mety hanana izay mitovy amin’ny atao hoe Mesia. Amin’ny Kristiana dia efa tonga teto an-tany ny Mesia, dia i Jesoa Kristy, sady mbola hiverina eto; fa amin’ny ankapobeny dia mbola miandry ny fahatongavan’ny Mesia ny Jiosy. Manao an’i Jesoa (Îsâ) ho Mesia ny fivavahana silamo. Amin’ny Kristiana dia efa tonga ny Mesia fa ho an’ny Jiosy kosa dia mbola ho avy izy.
Fanosorana an'i Davida - Paul Véronèse, 1555
Ny hoe mesia dia manambatra ny anjara asa maha-mpanjaka amin’ny anjara asa maha-mpisorona. Mahita zavatra fahatelo hamaritany ny atao hoe Mesia ny Kristiana, dia ny amin’ny fiaretana fijaliana sahala amin’ilay Mpanompon'i Iahveh ao amin’ny Bokin’i Isaia (Is. 42.1-9; 49.1-7; 50.4-11; 52.13 – 53.12). Ao amin’ny teolojia kristiana, i Jesoa no heverina ho ilay hany olona mahafeno ireo fepetra ireo.
Ampiasaina ivelan’ny tontolon’ny teolojia koa ny teny hoe mesia mba hanondroana izay olona mihevi-tena na heverina fa mpanafaka ny firenena na ny vahoaka iray na izay olona andrasana ho mpamonjy ny olombelona ao amin’ireo fivavahana hafa.
2 Ny Mesia araka ny finoana jiosy
2.1 Ny Mesia araka ny Tanakh
2.2 Ny Mesia araka ny Jodaisma tranainy sy amin’izao fotoana izao
3 Ny Mesia araka ny fivavahana kristiana
3.1 Fivoasan'ny Kristiana ny Testamenta Taloha
3.2 Filazàn’ny Testamenta Vaovao
4 Ny Mesia araka ny fivavahana silamo
4.1 Ny Mesia araka ny Kor'any
Ny teny hoe mesia dia avy amin’ny teny grika hoe Μεσσίας / Messias izay avy amin'ny teny hebreo hoe מָשִׁיחַ / mashiakh na ny teny arameana hoe משיחא / meshiha izay midika hoe "voahosotra", sady manondro ny mpamonjy ny olombelona ka ny fahatongavany izay andrasana dia voalaza mialoha ao amin’ny Testamenta Taloha. Ao amin’ny Septoaginta (na Septanta), io anarana io dia nadika hoe Khristos, ka avy amin’io no nahazoana ny hoe Kristy. Izany no nahatonga ny anarana hoe Jesoa Kristy na Jesosy Kristy hanondro an’i Jesoa (na Jesosy) ho ilay Mesia. Avy amin’ny fototeny hoe משח, izay midika hoe "fanosorana ny olona iray amin’ny menaka oliva", araka ny fomba amam-panao jiosy, io teny io.
Ny Mesia araka ny finoana jiosyModifier
Ny olona nohosorana voalohany, araka ny Baiboly, dia hita ao amin’ny Bokin’ny Eksodosy (Eks. 29) ka ireo mpisorona no nohosorana tamin’izany: "Ary alao ny diloilo fanosorana, ka aidino amin'ny lohany, dia manosora azy." (Eks. 29.7). Tamin’ny fotoan’ny Fahababoana tany Babilona, ny mpaminany sasany dia miresaka ny amin’ny mesia, dia ny mpanjaka izay hanorina indray ny fanjakana ao amin’ny tanin'i Isiraely sady hanafaka azy. Taty aorian’ny Fahababoana dia navelan’ireo Persiana hody any an-taniny ny Jiosy ka i Ezra (na Esdrasa), izay mpisoron-dehibe tao Jerosalema, no niandraikitra ny fanorenana indray ny Tempoly sy ny jodaisma, fa i Zorobabela kosa, izay taranak’i Davida, dia voatendry ho mpanapakan'ny faritanin’i Jodea (na Jodea). Ny tanjon’ny Persiana anefa dia tsy ny hiverenan’ny fahaleovantena ara-politikan’ireo faritany anjakany fa ny hamerina indray ny fomba amam-panaony mba hahatonga azy ireo hanoa ny fitondrana persiana. I Zorobabela dia natsoina hiverina any Babilona, noho izany dia mpisorona no nantenaina ho Mesia.
Tamin’ny taonjato voalohany, noho ny fiheverany ny Romana ho ny zavatra ratsy indrindra, ny Jiosy dia nivaofy ny faminaniana ao amin’ny Baiboliny (Tanakh) ho manondro olona voatendrin’Andriamanitra hitondra ny Jiosy amin’ny fahafahana. Ambonin’izany, nikorontana na ara-politika na ara-pivavahana i Jodea: maro ireo "sekta" niady fahefana sy niady ho lohany ara-pivavahana. Ny Sadoseo sy ny Fariseo ary ny Eseniana no tena natanjaka indrindra amin’ireo. Tao koa ireo Galileana sy Zelota ary Sikara.
Ny Mesia araka ny TanakhModifier
Tsy mitovy ny fomba filazan’ny boky ao amin’ny Tanakh (Baiboly hebreo) ny amin’ny Mesia. Ny mpisoron’i Israely sy ny mpaminany ary ny mpanjaka dia samy voahosotra amin’ny menaka masina alohan’ny handraisany ny asany.
I Kirosy Lehibe sy ireo Hebreo - nataon'i Jean Fouquet - 1470-1475.
Maromaro ireo faminaniana izay miresaka ny amin’ny olona iray ao amin’ny taranak’i Davida hohosorana hitondra ny Jiosy sady hatao hoe מלך המשיח / Melekh hamashiah ("mpanjaka mesia" na "mpanjaka voahosotra") na Mashiah ("voahosotra"). Ny faminaniana momba io olona io dia miresaka azy ho taranaky ny mpanjaka Davida, izay hanangana indray ny firenen’i Israely sy hitondra fiadanana amin’izao tontolo izao amin’ny alalan’ny fametrahana indray ny Fanjakan'ny taranak’i Davida sady handringana ny ratsy fanahy sy hitsara izao tontolo izao amin’ny andro farany.
Araka ny hevitr’i Neil Asher Silberman, ao amin’ny ankamaroan’ny boky ao amin’ny Baiboly, ny hoe mashiakh dia midika hoe "mpitarika mahery ampanatanterahin’Andriamanitra asa". Nampiasaina hanondroana an’i Saoly (na Saola) sy i Davida ary i Solomona (na Salomona) ary i Kirosy Lehibe (izay tsy Hebreo na Jiosy fa Persiana) ihany koa io teny io. Tamin’ny nandravan’ny Babiloniana ny Fanjakan’i Jodà (586 tal. J.K.), ny vahoaka jiosy dia nanomboka niandry ny fotoana hahatongavan’ny mpanjaka voahosotr’Andriamanitra tahaka an’i Davida, na ny iray amin’ireo taranany, mba "hitsangana handringana ny fahavalon’i Israely" sy hamerina indray ny fahaleovan-tenany ary koa hanangana indray ny fanjakan’Andriamanitra eto an-tany.
Ny Mesia araka ny Jodaisma tranainy sy amin’izao fotoana izaoModifier
Tsy mitovy ny fiheverana ny mesia eo amin’ny jodaisma tranainy sy ny jodaisma ankehitriny. Ny Talmoda (hebreo: תַּלְמוּד /Talmud) dia maneho karazana mesia roa: dia ny Mesia zanak’i Josefa sy ny Mesia zanak’i Davida. Amin’ny fiteny hebreo, ny teny hoe ben dia manondro amin’ny ankapobeny ny hoe "zanaka", nefa mety hanondro ny taranaka avy amin-dray rehetra, sahala amin’ny teny arabo hoe ibn. Hivoaka avy amin’i Jodà ny Mesia zanak’i Davida, izany dia mamerina indray ny zava-nitranga ny amin’i Kaleba, izay taranak’i Jodà, sy i Josoa taranak’i Efraima zanak’i Josefa. Ny hoe ben sy ny hoe av (na ab) dia mety hanana heviny hoe "sahala amin’ny fanaon’ny". Hisy izany ny "mesia miaritra fijaliana", sahala amin’i Josefa, sy ny "mesia mpandresy" sahala amin’i Davida. Amin’ireo raby jiosy sasany kosa, ny taranaka mifandimby tsirairay dia samy hanana ny mesiany avy.
Ny jodaisma ortodoksa sy ny jodaisma tranainy dia mino ny Mesia ara-nofo izay ho tonga hitondra ny fiadanana eto amin’izao tontolo izao. Ny jodaisma nohavaozina kosa dia mampianatra fa hisy vanim-potoana hisian’ny fiadanana sy vanim-potoana mesianika, nefa tsy hisy mesia: ny fiadanana dia vokatry ny fanarenana an’izao tontolo izao (hebreo: תיקון עולם / tikkun olam) izay avy amin’ny fiezahan'ny rehetra mankany amin’ny fahamarinana ara-piarahamonina, fa tsy asan’olon-tokana. Tsy olon-tokana ny Mesia.
Ny Mesia araka ny fivavahana kristianaModifier
I Kristy miakatra ho any Kalvary, Raphael, 1516.
Manorina ny finoany an'i Jesoa ho Mesia ao amin'ny Testamenta Taloha sy amin'ny Testamenta Vaovao ny Kristiana.
Fivoasan'ny Kristiana ny Testamenta TalohaModifier
Ny fahatongavan’ny Mesia voafidin’Andriamanitra, dia nambara imbetsaka ao amin’ny Testamenta Taloha. Mampifandray ireo faminaniana ireo amin’i Jesoa ny Kristiana. Mino ny Kristiana fa i Jesoa no ilay Mesia na Kristy. Ny teny hoe Kristy (gr.: Χριστός / Khristos, "voahosotra") dia dika ara-bakitenin’ny hoe mashiakh izay ampiasaina ao amin’ny Septoaginta. Avy amin’ny matoanteny hoe χριω / khriô izay midika hoe "manosotra menaka manitra", sahala amin’ny rehefa avy nandro, ny teny hoe khristos. Ny Fanjakan’ilay Mesia niaritra fijaliana, araka ny hita ao amin’ny Bokin’i Isaia (Is. 52 -- 53) dia tsy avy amin’izao tontolo izao. Ny teny grika hoe Μεσσίας / Messias dia tsy miseho afa-tsy in-droa ao amin’ny Testamenta Vaovao: ao amin’ny Filazantsaran’i Jaona (Jao. 1.41 sy Jao. 4.25).
Mino ny Kristiana fa voalazan’ny mpaminany ny Mesia hateraka ao Betlehema (Mika 5.1), hateraky ny zazavavy (na virijina) (Is. 7.14), hatao hoe "Mahagaga, Mpanolotsaina, Andriamanitra mahery, Rain’ny mandrakizay, Andrian’ny fiadanana" ny anarany (Is. 9.5) sady taranak’i Davida (Salamo 89.4).
Misy fitoviana ny ao amin’ny Isaia (Is. 53) ny amin'ny tantaran’ny fijalian’i Jesoa araka ny hita ao amin’ireo Filazantsara. Efa voalaza mialoha ao amin’ny Isaia (Is. 53.10) koa ny fijaliany:
"Nefa sitrak’i Jehovah ny hanorotoro sy hampangirifiry Azy; Rehefa manolotra fanati-panonerana Izy, dia hahita taranaka sady ho maro andro, ary ny sitrapon’i Jehovah dia hambinina eo an-tànany." (na: "Nefa sitrak'i Jehovah ny hanorotoro sy hampangirifiry Azy; Rehefa ataonao fanati-panonerana ny ainy, dia hahita taranaka Izy sady ho maro andro, ary ny sitrapon'i Jehovah dia hambinina eo an-tànany.") (Ny Baiboly).
Filazàn’ny Testamenta VaovaoModifier
Ny Fitsarana farany - Stefan Lochner - 1435.
Araka ny voalaza ao amin’ireo Filazantsara telo voalohany (Matio sy Marka ary Lioka), nambaran’ny anjely fony izy mbola tany an-kibon’i Maria ny maha-Mesia an’i Jesoa (Mat. 1.20-23), toy izany koa tamin’ny nahaterahany (Lio. 2.9-14) sy tamin’ny fanaovam-batisa azy (Mar. 1.11). Neken’ireo demony izany maha-Mesia an’i Jesoa izany (Lio. 4.41) sady ninoan’i Petera sy i Jesoa tenany koa (Mat. 16.16-17). Ny Filazantsara araka an’i Marka (Mar. 14.61-64) dia mitantara ny naneken’i Jesoa ny maha-Mesia ny tenany sady maneho koa fa izany no antony namonoana azy.
Ny Apokalipsan’i Joany dia milaza momba ny hiverenan'i Jesoa indray:
"11 Ary nahita ny lanitra voasokatra aho, ka, indro, nisy soavaly fotsy; ary Izay nitaingina azy dia atao hoe Mahatoky sy Marina, ary amin'ny fahamarinana no itsarany sy iadiany. 12 Ary ny masony dia lelafo, ary tamin'ny lohany nisy diadema maro; ary Izy manana anarana voasoratra, izay tsy misy mahalala akory afa-tsy ny tenany ihany. 13 Ary miakanjo akanjo voafafy rà Izy; ary ny anarany atao hoe Ny Tenin'Andriamanitra" (Apo. 19.11-13).
Ny Mesia araka ny fivavahana silamoModifier
I Maryam sy i Îsâ, sary persiana
Ao amin’ny fivavahana silamo, i Jesoa (arabo: Îsâ) dia tsy inoana ho zanak’Andriamanitra na ho Andriamanitra, fa mpaminany lehibe nampianatra ny lalàn’Andriamanitra. Manao an’i Jesoa ho الْمَسِيحُ / 'Al-Masih' ny boky Kor'any, sady manambara ny hiverenany indray ety an-tany amin’ny andro farany.
Amin’ny maha Mesia an’i Jesoa Kristy (Masih’ Îsâ) ao amin’ny fivavahana silamo, ireo manampahaizana (sahala amin’i al-Qurtubi na i ibn Kathir, na i Tabarî) dia manorina ny filazàny amin’izao andininy izao:
“Tsy hisy ao amin’ireo olon’ny Boky izay tsy hino azy alohan’ny hahafatesany. Ary amin’ny Andron’ny Fitsanganan-ko velona, ho vavolombelona hiampanga azy ireo izy” (Kor'any 4, an-Nisa: 159).
I Tabarî dia manazava fa ny asan’i Jesoa dia manomboka ao Damaskosy (na Damasy) any Siria-Palestina izay hidinan’i Jesoa avy any an-danitra. I Jesoa dia hamongotra ny Antikristy (arabo: al-Masih ad-Dajjal “ny Mesia sandoka”) ao Palestina eo am-bavahadin’i Loda (izay tsy lavitra ny Tempolin’i Jerosalema); ny asany amin’ny maha Mesia azy dia hanomboka ao Palestina ka hiitatra manerana izao tontolo izao; ka amin'izany:
"Ny liona dia hiara-belona amin’ny zanak’ondry nefa tsy haninona azy, ny ankizy hilalao amin’ny menarana nefa tsy hanaikira azy ireo." (Muslim, Les signes de la Fin des Temps)
Ny Mesia araka ny Kor'anyModifier
Ao amin’ny Kor'any, i Jesoa dia atao hoe Mesia. Miverina ao amin’ny andininy dimy na enina aza io teny io (4.171 ; 4.172 ; 5.17 ; 5.72 ; 5.75) . Ny andininy 3.45 dia hoatra ny miteny azy koa, na dia tsy izany no andikana azy amin’ny teny hafa toy ny frantsay. Nefa isaky ny milaza izany izy dia mampahatsiahy fa tsy zanak’Andriamanitra i Jesoa. Ohatra :
"Ry olon’ny Boky, aza manao zavatra mihoatra ao amin’ny fivavahanareo, ary aza miteny ny amin’i Allah afa-tsy ny fahamarinana. Ilay mesia Jesoa, zanak’i Maria, dia tsy inona fa Irak’i Allah, ny Teniny izay nirahiny ho ao amin’i Maria, ary fofonaina avy Aminy. Noho izany minoa an’i Allah sy an’ireo irany. Ary aza milaza hoe "Telo". Atsaharo! Izany no tsaratsara kokoa ho anareo. I Allah dia Andriamanitra tokana. Be voninahitra loatra izy amin’ny hoe hanan’anaka. Azy ny zavatra rehetra any amin’ireo lanitra sy ety ambonin’ny tany ary i Allah dia ampy ho mpiaro". (Kor'any 4.171).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Mesia&oldid=973801"
Dernière modification le 3 Septambra 2019, à 10:59
Voaova farany tamin'ny 3 Septambra 2019 amin'ny 10:59 ity pejy ity.